Njikọ Njikọ, Njikọ FA Cup + Play-Offs - cheapinternetsecuritysoftware.com
Njikọ Njikọ, Njikọ FA Cup + Play-Offs
Kedu izu ụka. Premier League, Njikọ FA Cup, Asọmpi Egwuregwu. Ngwunye soccer gị dị ebe a, ị nwere ike were na ọkwa ọzọ na Nde Pound Picks – Grosvenor Sport’s free-to-play goalscorer amụma amụma egwuregwu.
Onyinye kacha elu bụ jackpot # 1M, e nwere # 2000 ekwe nkwa inye un kwa izu, anyị ga-atụbekwa Gamble 10 Free Bet na akaụntụ nke ọ bụla ọkpụkpọ na-eche na ọ ga-akara atọ akara.
Nke ahụ bụ isi nke ya niile. Enwere ozi ndị ọzọ na Nmalite Ndị Nduzi nke Nde Pound Picks mana ọ bụrụ d e ị dị njikere, gụọ amụma anyị miniature mee nke aka gị ebe a.
Ebuputara ozi maka klọb abụọ a. Nchebe maka Clarets na oge izizi mara mma maka Leeds. Ha abụọ masịrị han’izu gara aga mana anyị na-anọ d e ogige Chris Wood mgbe anyị nyechara goolu anọn’ime egwuregwu abụọ.
Fulham agbadatala, na Southampton enweela ọkara nke abụọ nke oge ahụ. Ma otu egwuregwu nwere ike igwu egwu, anyị maara ya. O nwere ike ịbụ ihe ọchị, Nathan Redmond bụ nhọrọ anyị.
Iko FA Cup: Chelsea v Leicester
Njikọ FA Cup nke mbụ maka Foxes na-adịghị mma, bụ ndị na-eche ndị iro dị egwu ihu na Thomas Tuchel’s Chelsea. Anyị na-adabere n’ebe ndị London na Jorginho nọ – ntaramahụhụ dodgy yiri ka ọ bụ tiketi iji kpochapụ oge ụlọ nke VAR na-achịkwa.
Nchighari na-echegbu onwe ya, nrụgide kwụsịrị Brighton? ) Mana ka Dunk na Maupay kwụsịtụrụ, nke a bụ nnukwu ohere maka West Ham ịchịkwa olile anya Champions League ha. Nhọrọ – Tomas Soucek.
Na enweghị Grealish ma ọ bụ Watkins, Villa ga-enweghị njedebe ha d e njedebe nke atọ ma yabụ anyị t Palace t nwoke anwansi ahụ bụ Eberechi Eze na-agagharị. Mfe.
Spurs na Wolves
Domin na Dominic Calvert-Lewin. Egwuregwu atọ ebe anyị na-achọ mmasị, na atọ ahụ nke ndị na-eti ihe nọ ebe ahụ na eserese goolu nwere goolu 57 n’etiti ha. Itunanya bu t, t treble akwụ 55/1 na Grosvenor Sport.
Bournemouth na Brentford
Egwuregwu egwuregwu-egwuregwu. Kemmiri ihe. Karịsịa na Cherry na-enweta ihe na-aga n’ihu Brentford. Ndị meririn’ụkwụ abụọ that a nwere ike bụrụ ọkacha mmasịn’agba ikpeazụ, mana onweghị akụkụ na-eti mkpu bọọlụ cagey. Brentford, nke Ivan Toney na-ebute ụzọ, nwere ike igosi na ọ dị oke mma na ihe mgbaru ọsọ 31 bụ nhọrọ anyị.
Daryl Dike keere òkè dị mkpa na Barnsley dị egwun’oge a; nke only t ndị Tykes gburu otu nkwekọrịta na ụlọ nne na nna Orlando City iji debe onye America na Oakwell maka oge nke Play-Offs. Ezi uche, anyị na-agụ.
Premier League ịkụ nzọ dịn’oge niile ogologo oge na Grosvenor Sport na nke a bụ nsogbu na Million Pound Picks iji buru akara mbụ na oge ọ bụla na ngwụsị izu a – ọ bụrụ na ị na-eche.
PlayerTeamFirstAnytimeWoodBurnley17 / 413 / 10RedmondSouthampton8 / 13 / 1SoucekWest Ham9 / 117 / 5EzeCrystal Palace12 / 15 / 1JorginhoChelsea9 / 118 / 5KaneSursurs3 / 119 / 20SalahLiverpool13 / 54 / 7Calvert-Lewin
* Ọnọdụ ndị akọwapụtara ziri ezin’oge edere
Tags:Cup Njikọ PlayOffs
Cinggba egwú Drums Bọmbụ gbawara Review (RTP: 96%)
Egwuregwu Sayensị gbakwunyere oghere ọzọ na nchịkọta egwuregwu ya nke …
Were onwe gi ju onwe gi anya n’ile elu igwe …
Dapatkan mood dengan Gladiator berani Quickspin dan Macan Marah. Tiger’s …